abcnepali | » भिडियो खिच्ने को ? किशोर श्रेष्ठ शंकाको घेरामा ! भिडियो खिच्ने को ? किशोर श्रेष्ठ शंकाको घेरामा ! – abcnepali
एक वर्ष अघि किशोर श्रेष्ठले रविको अमेरिकन पासपोर्टको झमेला झिकेर नेपालबाट लखेट्ने प्रयास गरेका थिए तर असफल भए । रविले अमेरिकन पासपोर्ट त्यागे । श्रेष्ठ रविसँगको विवादमा नराम्ररी बद्नाम भए । रविसँग त्यही बदला निल शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा रविलाई सडाउने सड्यन्त्रमा श्रेष्ठ लागेका हुन् । तर, यस यस घटनामा उनी आफैँ बिवादको घेरमा परेका छन् ।
श्रेष्ठलाई लाग्न सक्छ हत्याको दोस्रो अभियोग
श्रेष्ठ सम्पादक रहेको जनआस्था साप्ताहिकले २०५९ साल असोज २३ गते नायिका श्रीशा कार्कीको नग्न तस्वीरसहित समाचार प्रकासन गरेको थियो । जनआस्थाले श्रीशालाई वेश्यावृतिमा सम्लग्न भएको तथ्यहिन आरोप लगाउँदै नग्न फोटो प्रकाशन गरेपछि श्रीशाले असोज २८ गते आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
जनआस्थाले नग्न तस्वीर प्रकाशन गरेर श्रीशा कार्कीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको भन्दै सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई कारवाहीको माग गर्दै कलाकारले सडक आन्दोलन गरे ।
जानकारका अनुसार श्रेष्ठ विरुद्धको श्रीशा हत्या अभियोग सरकारले चाहेमा पुनः व्यूँताउन सक्छ । श्रेष्ठ विरुद्धको हत्या अभियोग न्यायिक निकायबाट निरुपण भएको होइन । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा स्थगन मात्र गरेकाले उनी हत्या जस्तो संगीन आरोपबाट मुक्त भएका छैनन् ।
श्रीशा कार्कीको हत्याको आरोप लागेका श्रेष्ठलाई शालिकराम पुडासैनीलाई पनि आत्महत्या गर्न सड्यन्त्र गरेको आरोप लाग्न सक्छ । प्रहरीलाई प्रभावमा परेनन् भने भिडियो सार्वजनिक गर्ने पहिलो व्यक्ति भएकाले श्रेष्ठ प्रहरी अनुसन्धान र शंकाको घेरामा तानिन्छन् । भिडियो सार्वजनिक प्रकरणमा श्रेष्ठले प्रहरी र अदालतलाई सहयोग गरेनन् भने त्यसको आरोप उनीमाथि नै लाग्न सक्छ ।
मर्ने पुडासैनी पनि पत्रकार, आरोपित पनि पत्रकार, आरोप लगाउन कम्मर कसेर लाग्ने श्रेष्ठ पनि पत्रकार हुन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली पत्रकारिता जगतले यस घटनाको खोजी र अनुसन्धान थप सक्रियता देखाउनु पर्दछ । श्रीशा काण्डमा सिंगो पत्रकारिता जगतको शिर झुकेको थियो ।
शालिकराम प्रकरणमा पनि पत्रकारिता जगतले शिर झुक्न नदिन श्रेष्ठले भिडियोको स्रोत खोल्नु पर्दछ । स्रोतलाई कुनै खतरा भएको अवस्था स्रोत खोल्दिन भन्न सकिन्छ । तर, भिडियो दिने स्रोतलाई कुनै खतराको सम्भावना छैन । यो एक गम्भिर विषय पनि हो ।
श्रेष्ठले पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा शंका र आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने पनि स्रोत सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ । र, अनुसन्धानमा अदालतलाई सहयोग गरेर मात्र उन्मुक्ति पाउन सक्छन् । होइन भने, पुडासैनीको मृत्युमा उनको सड्यन्त्र र संलग्नता हुन सक्ने शंकाले सँधै आलोच्य बन्न सक्छन् ।साभार ः सजिलो खवर, लेखक पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष हुन् ।